Isikhathi okuthiwa yi-turkey ebusheni | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 02/07/2021 22:00 | Intsha
Akekho ophikisana neqiniso lokuthi akulula noma kulula ukukhulisa ingane. Zonke izigaba zokuphila ziyinkimbinkimbi, yize lowo othatha ikhekhe ngaphandle kokungabaza ubusha. Kuyisigaba sokuphila esiyinkimbinkimbi ngempela kubazali nakubantu abasha ngokwabo abenza lezi zinguquko.
Kuvame ukushiwo ngendlela yokuhlangana ukuthi kungumnyaka weTurkey yize lesi sitatimende singelona iqiniso ngokuphelele. Esihlokweni esilandelayo sizokutshela ngokuningiliziwe ngamalebula ahlukile nezinkolelo ezizungeze umhlaba onzima wobusha.
1 Ubusha yisikhathi samalebuli nezinkolelo
2 Kungani isikhathi sobusha siyisikhathi esihle?
Ubusha yisikhathi samalebuli nezinkolelo
Njengoba sesishilo, Ubusha yisigaba esiyinkimbinkimbi kunazo zonke umuntu okufanele adlule kuso. Izinguquko ezingokomzimba nezingokomzwelo zingaphezu kokusobala nokuthi intsha eningi iyacasuka kuzo zonke izici. Ama-stereotypes namalebula ngokuthomba sekukhanya kwelanga futhi lokho akuzithandi nhlobo izintsha.
Akunakuhlobene nesigaba sobusha nezidakamizwa, utshwala, amaphathi, ukungahloniphi noma udlame. Intsha ingaphezu kwalokho, okwenzekayo ukuthi kuyisigaba sempilo esiyinkimbinkimbi nezinguquko eziningi.
Ngokunikezwe lokhu, kunabazali abaningi abesaba okubi kakhulu ngaphambi kokufika kwentsha. Enye yemishwana esakazeke kakhulu emphakathini wanamuhla ukuthi ingane lapho ifinyelela ebusheni isencane yobudala be-turkey. Ingenye yamalebula amaningi azosetshenziswa lapho kuchazwa lesi sigaba sempilo.
Iqiniso ukuthi iqiniso lokusebenzisa imibono eyeqisayo yohlobo lwale minyaka eshiwo ngenhla ye-turkey, alwenzi okuhle kunoma yinsizwa ezama ukwakha ubuntu bayo ukuze ube umuntu omdala.
Kungani isikhathi sobusha siyisikhathi esihle?
Kujwayelekile impela ukuthi abazali bakhombise ukungazethembi ngokuthi ingane yabo izosuka ekubeni yingane iye ebusheni. Kepha lesi akusona isiqongo ukuze amalebula ahlukene abekwe kubantu abasha. Akungabazeki ukuthi abantu abasha bazobhekana nochungechunge lwezinguquko ezibaluleke kakhulu emzimbeni nasengqondweni. Kepha ushintsho olunjalo alulubi futhi alubi kubazali noma kubantu abasha uqobo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqeda yonke imidwebo namalebula obusha njengamabinzana athandwayo: "le ngane ingeyesikhathi se-turkey"
Isigaba sobusha ngakho-ke kufanele sibe yisikhathi esihlukile futhi esingaphindaphindeki lapho abantu abasha kufanele baphile i-100%. Akukhathalekile imibono eyehlukile abanayo ngazo, ngoba kuncike kakhulu kubazali nakubachwepheshe ukuthi baqinisekise ukuthi abantu abasha basebenzisa wonke amakhono abo futhi babe ngabantu abadala abakufanele ngempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Intsha » Isikhathi okuthiwa yi-turkey ebusheni
Okhiye bokudla okusimeme
Ukulingisa izinkuni: kungani zithandwa kangaka?